नेपालमा अब अंग्रेजी पढाउन निषेध गर्नुपर्छ नत्र अंग्रेजी भाषाका कारण हामी घर न घाटका हुनेछौं::Pathivara News
नेपालमा अब अंग्रेजी पढाउन निषेध गर्नुपर्छ नत्र अंग्रेजी भाषाका कारण हामी घर न घाटका हुनेछौं
योगेशकुमार खपाङ्गी- अंग्रेजीको धमास र प्रभाव ! नेपालको माम खाएर पत्रकार, प्राध्यापक, डक्टर, इन्जिनियर, वकिल, कलाकार, बिज्ञ, विद्वान बन्छन् अनी जब उस्ले देशका लागि खास काम गर्नुपर्ने दिन आउँछ, उनिहरु डिभी भरेर, भिजिट भिषामा गएर वा अन्य बिभिन्न तिकडम गरेर बिदेश पलायन हुन्छन् । यसरी त उनिहरु माथि गरिएको यो देशको लगानी खेर गयो नि ! होइन र ? नेपाली ‘ब्रेनपावर’हरु यहाँँ बसेर केही गर्नुभन्दा बनिबनाउ ठाउँमा नै जान सजिलो मान्न थाले ।अनी बसाइ हिंड्नेहरु भन्ने गर्छन् – ‘यो देश सतीले सरापेको देश हो, कहिले उँभो लाग्दैन ।’
सतीले सरापेको भन्ने कुरा फगत एक अन्धबिश्वास हो । तापनी त्यसो भन्नेहरुका कारण आफ्नै देशमा बसेर केही गर्छु भन्नेहरुको समेत मनोबल गिरिरहेको छ । चौतर्फी निराशा बढ्दो छ् । यसो हुनुमा बिभिन्न कारणहरु छन् । तर त्यस मद्धे प्रमुख कारण अंग्रेजीभाषाको अनावश्यक बढ्दो प्रभाव पनि हो । हेर्दा-हेर्दै यो देश यतीसम्म अंग्रेजीको गुलाम भइसक्यो कि, कसैले बिशुद्ध नेपालीमा बोल्यो भने गिज्याइन्छ, हाँसोको पात्र बनाइन्छ (उदाहरणको रुपमा श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टको राम्रो अंग्रेजी नभएकाले सामाजिक सन्जालमा उडाइएको खिल्ली) । कतिपय ठुला भनौदा बोर्डिङ्ग स्कुलहरुमा अंग्रेजी भाषा बाहेक आफ्नो मात्रीभाषा बोल्यो भने छडी बर्षाइन्छ । टुटेफुटे भए पनि कसैले अंग्रेजी छाँट्यो भने मात्र यहाँका मान्छेले उस्लाई गतिलो मान्छे भन्छन् ।
जापान, कोरिया, चीनका ‘ब्रेनपावर’हरु अमेरिका, युके, युरोप नजानुको पछाडि उनिहरुको अंग्रेजी भाषामा दक्खल पर्याप्त नभएर पनि हो । जस्ले गर्दा उनिहरुमा देश प्रेम उत्तिक्कै छ, उत्तिकै बिकास पनि छ । तर अंग्रेजी भाषाले नेपालीजनको पश्चिमाहरुसंग अनावश्यक लसपस भो । उनिहरुको कल्चर र लाइफस्टायलको बढी नै धमास हुनथाल्यो ।
भारतमा अंग्रेजी बोल्नु उनिहरुको बाध्यता हो । पहिलो कुरा त उनिहरु अंग्रेजका गुलाम थिए, गुलामले मालिकले बोल्ने भाषा मनपराउनु स्वभाविक हो । अनी अर्को कुरा उनिहरुकोमा हिन्दी नबुझ्नेको जनसंख्या अत्यधिक छ, प्रान्तै पिच्छे फरक भाषा, फरक रहनसहन छ । त्यसैले उनिहरुको कम्युनिकेशनको साझा भाषा अंग्रेजी हुनु वाध्यकारी कुरा पनि हो । तर नेपाल त अंग्रेजको प्रत्यक्ष गुलाम कहिले पनि थिएन नि ! हामीले किन उस्को भाषिक गुलामीमा बस्नुपर्ने ?
नेपालमा अब अंग्रेजी पढाउन निषेध गर्नुपर्छ । अंग्रेजीमा भएका विश्वप्रसिद्ध साहित्य वा प्राविधिक बिषयहरु पनि नेपालीमा उल्था गर्नुपर्छ । नत्र अंग्रेजी भाषाका कारण हामी एक दिन घर न घाटका हुनेछौं । पक्का !